Rakotomalala Hery: « Hisokatra eo amin’ny sehatra Afrikana ny GNVB » | NewsMada
Rakotomalala Hery: « Hisokatra eo amin’ny sehatra Afrikana ny GNVB »
Resabe eny anivon’ny fiarahamonina, indrindra ny eny anivon’ny zandarimariam-pirenena, ilay fandresena goavana azon’ny klioban’ny Zandarmaria Nasionaly Volley-ball (GNVB), ny faran’ny herinandro teo. Raha tsiahivina, fanintelony izao no nahazoan’ity klioba malagasy ity izao anaram-boninahitra izao. Araka ny nambaran’ny filohan’ny GNVB, Rakotomalala Hery, taorian’ny tamin’ny 2015 tany Ejypta, mbola vonona ary mikasa handray anjara amin’ny fiadiana ny tompondakan’i afrika indray ny klioba amin’ity. Etsy ankilany, hoy izy, nisongadina tokoa ny GNVB tamin’ity, nahazo fankasitrahana manokana ny mpilalao miisa roa teo anivon’ny klioba. Natolotra an’i Tolojanahary ny anaram-boninahitra “meilleur défenseur”, raha toa ka i Kamaka kosa no nahazo ny “meilleur attaquant”.
Mahakasika indrindra ny fanirian’ny klioba handray anjara amin’ny fiadiana ny tompondakan’Afrika ity, miantso ireo malala tanana rehetra hanohana azy ny klioba, hoy hatrany ity filoha ity, satria mila fanomanana, indrindra eo amin’ny ho enti-manana ny fiatrehana izany fifaninanana izany. Mahakasika izay hatrany, niantso ny federasiona, ny mpitantana klioba, ihany koa izy ireo, ny mba hifandrombonan’ny rehetra, satria dia afaka mandeha lavitra ny ekipa malagasy raha mahay mifarimbona. « Miantso ireo taninketsa isaky ny klioba sy ireo tanora manana halavana ho tonga hanatevin-daharana fa vonona ny hanampy azy ireo izahay. Taranja sarotra kanefa azo ianarana tsara ny taranja volley ball. Afaka hireharehana sy hampisongadina tanteraka ny firenena malagasy. Mbola maro ny ezaka miandry, indrindra ny fanomanana ny lalaon’ny nosy, ny volana jiona izao », nanamafy ny filohan’ny GNVB.
Hatreto, miomana tanteraka ary efa vonona ihany koa ny hisolo tena ny aty amin’ny faritra fahafito, ny GNVB, amin’ilay fiadiana ny amboaran’Afrika ny klioba tompondaka, hotanterahina any Ejypta ny 30 martsa hatramin’ny 12 aprily izao.